कस्ता व्यक्तिले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन मिल्दैन ? onlinedarpan.com
Sunday 3rd of July 2022 / 11:14:31 AM
अनलाइन दर्पण 2021-07-15
काठमाडौं । देशभर कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप अभियान जारी छ । खोप कस्तो व्यक्तिले लगाउने र कस्तो व्यक्तिले लगाउन नमिल्ने ? आमसर्वसाधारणमा अन्योलता छाएको छ । केही खोप केन्द्रहरूले उमेर मात्रै सोधेर खोप उपलब्ध गराउने गरेको समेत पाइएको छ । केही खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाएका सर्वसाधारणको विस्तृत विवरण नराखिएको देखिएको छ ।
खोप लगाउनुअघि आफ्नो रोग र आफूले सेवन गरिरहेको औषधिबारे स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सो विषय पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा बुधबार खोप लगाउन पुगेकी २८ वर्षीय शारदा कुवँरले भनिन्, ‘खोप लगाउने क्रममा मलाई उमेर सोध्नुभयो अरू केही सोध्नुभएन अनि लगाइहाले ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका अनुसार खोपको पहिलो मात्रा लगाएपछि एनाफाइलेक्सिस प्रतिक्रिया (गम्भीर एलर्जी) भएको व्यक्तिले खोप लगाउन मिल्दैन । यस्तै, यो खोपको कुनै तत्वबाट गम्भीर प्रकारको प्रतिक्रिया वा एनाफाइलेक्सिस भएको व्यक्तिले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन मिल्दैन ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेर
पहिलो मात्रा लगाएपछि गम्भीर एलर्जी भएमा
उच्च ज्वरो आएको व्यक्तिले निको नहुन्जेल
हाल (खोप लगाउने समयमा) गम्भीर बिरामी भएको
संक्रमणमुक्त भएको ३० दिनअघि
खोपको कुनै तत्वबाट गम्भीर प्रकारको प्रतिक्रिया भएमा
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिला अन्य कुनै खोप, सुई, औषधि वा खानेकुराबाट गम्भीर प्रकारको प्रतिक्रिया भएको व्यक्ति, .हाल गम्भीर बिरामी भएको वा उच्च ज्वरो आएको व्यक्तिले निको नहुन्जेल खोप लगाउन मिल्दैन । कोभिड–१९ का लागि मोनोक्लोनल एन्टिबडी वा कन्भाल्सेन्ट प्लाज्मा थेरापी उपचार विधि अपनाएका व्यक्तिले ९० दिनपछि खोप लगाउन मिल्ने केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
यस्तै, कोरोना संक्रमितले संक्रमणमुक्त भएको ३० दिनपछि खोप लगाउन मिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिमा पनि खोप प्रयोगमा आएको छैन । हालसम्म नेपालमा कोभि सिल्ड, भेरोसिल प्रयोगमा आएको छ भने जोनसन एन्ड जोनसनको खोप प्रयोगमा आउने क्रममा छ । हालसम्म ११ लाख बढी नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन् ।
यस्तै, देशभर बुधबार २ हजार ९ सय ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको १३ हजार २४ जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ । ८ हजार १ सय ८ जना पीसीसार परीक्षण गर्दा २ हजार १० र ४ हजार ९ सय १६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ८ सय ९५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । नेपालमा संक्रमित पत्ता लाग्नेदर १९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।
देशभर बुधबार १ हजार ६ सय ६ जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा १८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हालसम्म ९ हजार ४ सय ३० जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
देशभर २६ हजार ६ सय ४७ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, देशभर हाल २४ हजार ९९ जना संक्रमित होम आइसोलेसन र २ हजार ५ सय ४८ संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । संस्थागत आइसोलसनमध्ये ५ सय ९९ जना आईसीयूमा र १ सय ७२ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले संक्रमितको संख्या कम भए पनि जोखिम कायम रहेको बताए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।